'RUTGER COLEGE သည် RUTGER ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ခုတည်းသောအမှန်တကယ်သတင်းဖြစ်သည်' - ကျွန်ုပ်တို့သည် MEME စာမျက်နှာ၏ ADMIN မှပြောခဲ့သည် RUTGER COLEGE - နှုန်းထားများ
'Rutger colege သည် Rutger ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ခုတည်းသောသတင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်' - ကျွန်ုပ်တို့သည် meme စာမျက်နှာ Rutger colege ၏ admin နှင့်စကားပြောခဲ့သည်
စိုးရိမ်ပူပန်သောဆယ်ကျော်သက်များရှိသောကောလိပ်တစ်ခုတွင် Rutgers သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုပ်ထွေးသောဘဝများကိုကျောင်းသားများပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ကူညီရန်စိတ်ရှုပ်ထွေးသော memes များနှင့် meme မင်းများမပြည့်စုံပါ။ Rutgers အတွက်လူသိများသော meme စာမျက်နှာတစ်ခုမှ Rutger colege ဖြစ်သည်။ ယခုစာမျက်နှာသည်ကျောင်းဝင်းနှင့်ကမ္ဘာတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်နေသည့်လက်ရှိအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံများနှင့်အမြဲတမ်း (ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ) မမှန်ကန်သည့်စာလုံးပေါင်းကိုမှတ်သားထားသောစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါ ၄ င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်နှစ်သက်သူ ၄,၄၅၆ ယောက်နှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့် fanbase များရှိသည်။ Rutger colege ကိုဖန်တီးသူကိုသူတို့အမည်ဝှက်ထားမှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်။
အဖြေအားလုံးကို Rutger colege ၏မှော်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သူတို့၏မူလစာလုံးပေါင်းစာလုံးပေါင်းဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဒီတော့ starters တွေအတွက်၊ Rutger colege ကိုဘယ်လိုအသံထွက်မှာလဲ။
Rut-ger col-ij သို့သော် Rut-ger col-egg သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကအဲဒါကို Rutger Coll-egg-ee လို့ခေါ်ကြတယ်။
Trevor Noah တစ်ခုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်
7166 ကတည်းက colege အဖြစ်, 2013 ကတည်းက fb စာမျက်နှာအဖြစ်။
Fb စာမျက်နှာကိုလူဘယ်နှစ်ယောက် run သလဲ။
Harry Rutger ရဲ့သရဲသန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်။
Harry Rutger ၏အေးဂျင့်။
ur ဦး နှောက်နှင့်ဈေးကြီးသော Rutger ပညာရေး smartyans များကိုသုံးပါ။
ဒီတော့ဘွဲ့ရတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ သင်မီးရှူးကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အပေါ်သို့ကူးပေးမလား။
bowrer commons ဟင်းချိုအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်။
အဖြေကောင်း။ အဘယ်ကြောင့်သင် rutgers - သတ်သတ်မှတ်မှတ် meme စာမျက်နှာကိုစတင်ချင်ခဲ့တာလဲ
rutger colege သည် Rutger ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ခုတည်းသောသတင်းမှန်ဖြစ်သည်။ targum + tab ထက်ပိုကောင်းတယ်။ odysessy online သည် ***** အရည်အသွေးမြင့်မားသော်လည်းကောင်းသော်လည်းမကောင်းပါ။ ငါ rutger ကိုချစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကစတင်ပါ။ ငါ Harry Rutger ကိုနှစ်သက်တယ် ဘောလုံးကိုငါကြိုက်တယ်
Rutgers မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ Rutger colege ကိုကျွန်မရဲ့သတင်းလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုအမြဲစစ်ဆေးပါတယ်။
ဘာကြောင့်သင် tab ကိုမစစ်ဆေးသနည်း သူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်
ရေးရန် * သူတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Rutger colege မှာကုန်ပစ္စည်းတွေရှိပြီးသင်ပြပွဲတစ်ခုအတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိပါသလား။ ဒါအားလုံးဘယ်လိုအလုပ်မလုပ်သလဲ
တရား ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်မရှိသောကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုခုကိုကြည့်လျှင် Fake ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငါပြပွဲရှိသည်ချင်ပါတယ်သို့သော်အဘယ်သူမျှမနေရာများ။ ငါသူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့မြေအောက်ခန်းရှိပေမယ့်စကားလုံးမရှိလို့ demarest ခန်းမ၊ Rutger သမ္မတ Billy demarest အမည်ရစကားပြောဖို့ကြိုးစားတယ်။
လာမည့်အနာဂတ် Rutger colege အတွက်သင့်တွင်အခြားအစီအစဉ်များရှိပါသလား။ အပြင်ပြပွဲမှ?
ကောင်မလေး tinder ပေါ်လျှင်ရှိမရှိရှာဖွေပါ
အသစ်တစ်ခုကို lx လမ်းကြောင်း၏ကျောင်းသားများကိုအသိပေးတဲ့ခက်ခဲတဲ့ 1. ပါပဲ။ ငါကြိုက်တယ် ၁ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို trolls အဖြစ်မြင်သလား
အိုကေ။ မင်းရဲ့ meme-spiration ဘယ်ကနေရတာလဲ
- ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်၏ရေးသားချက်များနှင့်သွန်သင်ချက်များ Harry Rutger
- အဖြစ်အပျက်များသည်သတင်း / နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရုံသာဖြစ်သည်
ဒါကြောင့်ဟင်နရီ Rutgers, Harry Rutger မဟုတ်လော
ကိုယ့်မည်သည့်ဟင်ရီ rutgers kno dont ။ ဒါက 2pl လား? ကိုယ့် Harry Rutger, admrial နှင့် Rutger colege တည်ထောင်သူကိုငါသိ၏
ပြီးတော့ငါသူ၏သား, ဟင် Rutger Kno ။ pural: ဟင်ရီရပ်တာ (များ)
အဘယ်ကြောင့် anime ဇာတ်ကောင်၎င်းတို့၏ကျောနောက်ကွယ်မှသူတို့၏လက်နက်များနှင့်အတူပြေးကြဘူး
ငါသည်သင်တို့ကိုဤမျှလောက်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့် Rutgers သမိုင်း၏ကောင်းစွာအသိပေးနေဝမ်းသာပါတယ်။ သင်၏မှတ်စုများ (သို့) သတင်းများမှတစ်ဆင့်သင်မကြားရသောသင်၏အရည်အသွေးပြည့်သတင်းစာမျက်နှာကိုလူတို့အားသိစေလိုသည့်အရာတစ်ခုမှာဘာလဲ။
ငါလည်းဝမ်းသာတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို woud အကြောင်းကောင်းကောင်းအသိပေးရမယ်ထင်တယ်ထင်တယ်၊ သတင်းကိုသိရတာလည်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကြောင့်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။ အရာအားလုံးအပေါ်အမြင်မလိုအပ်ပါဘူး ဒီရက် ppl အပေါ်ဖိအားတွေအများကြီး theres
တစ်စုံတစ်ရာသောအတွေးအခေါ်နှင့်အရာအားလုံးအပေါ်ရပ်တည်ရန်စဉ်းစားရန်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်အချိန်ပမာဏအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဦး သည်တစ်စုံတစ်ခုတွင်ကောင်းသောအရာဖြစ်လာနိုင်သည်၊ ၎င်းအကြောင်းကိုများစွာ သိ၍ ထိုနည်းလမ်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ နှင့်အခြားသူများကိုအခြားအရာနှင့်ပတ်သက်။ ဦး ထက်ပိုသိသို့မဟုတ် ဦး ပါဝင်ပတ်သက်ကျော်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သင် ur မြည်းကိုထုတ်ပြောနေပါလိမ့်မည်လေးစားမှု။ က bak ခြေလှမ်းယူ ok ။
ကိုယ့်က၎င်း၏ 1 အရာနောင်တလျှင်ကိုယ့် RLY သူတို့အကြောင်းကိုအများကြီးသိ။ မရှိဘဲတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးမူဝါဒများအများကြီးဝေဖန်သော။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာဝေဖန်မှုတွေထက်ကျော်လွန်နေတယ်လို့မပြောစေချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အဲဒီအလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတာတွေကိုသိတဲ့သူကိုထားခဲ့ဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ငါပါဝင်ပတ်သက်ခရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒီအင်တာဗျူးကိုနိဂုံးချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဖန် Rutger colege! အရည်အချင်းပြည့်မီသောအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦး Joannie malnowskitz ကိုယ့်ကိုလည်း clickbait ချစ်ကြတယ်။ တစ် ဦး gr8 နေ့ကရှိသည်